3 အဘို့ရလဒ် green lantern
သငျသညျ Green Lantern အကြောင်းကိုဒီပဟေဠိဂိမ်းဖြေရှင်းရန်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသူရဲကောင်းသုံးအဆင့်ဆင့်အကြားကိုရွေးချယ်ပါ
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အထီးကျန်ရာစုနှစ်များစွာပြီးနောက်ပီပီ Knights ၏က Sky ခံတပ်ကိုတွေ့ပြီးပါပြီ! ဒါဟာ ... ကူညီ Buy နှင့်ထူးခြားသောနှင့် devestating လက်နက်တွေတက်မြင့်, ပေါင်းစပ်ဖို့သာသင့်ရဲ့သက်တံ့နှင့်အတူလူသားတို့၏ကျူးကျော်လာတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဆန့်ကျင်ခုခံကာကွယ်ဖို့သငျသညျအထိဖွင့်
၎င်း၏ထူးခြားသောရထားဘီးနှင့်အတူ, rigdon ဆိုင်ကယ်လမ်းကိုမောင်းဖို့အထူးဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ biker တစ်ဦးမတည်မငြိမ်လမ်းကနေတဆင့်မောင်းပါလိမ့်မယ်။
SpongeBob နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများကသင်ရမှတ်တက်ထိန်သိမ်းဖို့ဖြစ်နိုင်အတိုဆုံးအချိန်အတွက်ဖမ်းပြီးနိုင်ပါတယ်အဖြစ်ဇာတ်ကောင်များ၏အသီးအသီးအဖြစ်အများအပြားဘာဂါတွေနဲ့ finish ကိုရောက်ရှိကူညီ, သူတို့ရဲ့အသစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်ရေကူးဝတ်စုံနဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဆင်းများမှာ!
ben 10 သေဆုံးရေ
ဒါကခက်ခဲမစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘင် 10 မိမိအစကိတ်စီးကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသနှင့် 60sec timer နေရာမှာအနိုင်ရမှထွက်ပြေးမီက 3000 မှတ်စုဆောင်းရကိုကူညီပါ။
သူသည်အသက်အရွယ်၏ရခေဲစိုမှတစ်ဆင့်ရှုတ်ထွေးကျားမန်နီအ Mammoth နှင့်ဒီယေဂိုလမျးညှနျလာသောအခါသင်တို့ရှိသမျှသည်ရေခဲပြင်ခေတ်ရုပ်ရှင်တွေထဲကနေ Sid သတိရပါ။ ပူနွေးဖြစ်, သို့မဟုတ်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းပျင်းရိအထင်ကြီးဖို့ဖြစ်စေ, သူအချို့ပုံစံလိုအပ်ပါတယ်!